China Plastic mudhirowa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Zvigadzirwa zvepurasitiki pamba
Die vachikanda anoumba
Motokari epurasitiki zvikamu
Mapurasitiki edzimba epurasitiki bhokisi remagetsi
Dhirowa repurasitikiiri nyore, humboo chiratidzo, ngura-isingagadzirike uye iri nyore. Kuburikidza jekiseni Kuumbwa, kugadzirwa kwakawanda kunogona kuitika, uye kusimudzira kwehukuru uye kudomwa kunogona kuitika. Naizvozvo, madhirowa epurasitiki anoshandiswa zvakanyanya mudzimba, muhofisi uye kuzvitoro.
Dhirowa repurasitiki ibhokisi rakakona riine pasi uye isina chivharo chakagadzirwa nepurasitiki. Iyo inowanzo shandiswa sechikamu che cabinet uye tafura. Inoiswa mumuviri wetafura uye kabhineti. Iyo inogona kuburitswa kunze pamwe neiyo track kana yekufambisa slot yekuchengetedza zvinyorwa.
Chinhu chakashandiswa mudhirowa chaive huni kana iron. Asi huni chinhu chisingadzorerwe zviwanikwa uye chiri kuramba chichiwedzera kushomeka. Maitiro ekugadzira madhirowa kubva kuhuni nesimbi anorema, anodhura uye anonetsa. Madhirowa akagadzirwa epurasitiki akareruka uye anonyanya kushandiswa jekiseni kuumbwa, ayo ari nyore uye ari nyore kugadzirwa kwemaindasitiri muhuwandu hwakawanda. Saka yakashandiswa zvakanyanya. Nekuti
semuenzaniso, makabati, zvigadzirwa zvekuchengetera makabati, mabhenji ebhenji ebhenji, nezvimwewo, ese anoshandisa dhirowa repurasitiki.
Transparent dhirowa makabati
Rudzi urwu rwedhirowa rine mana akaturikidzana. Dhirowa mabhokisi akagadzirwa neyakajeka kana translucent PS kana PP. Shandisa chena kana translucent ABS kana zvinhu zvine simba riri nani kugadzira mafuremu uye kutsvedza nzira. Ruvara runako, yakapusa uye yakanaka. Inogona kushandiswa kuhofisi desktop desktop yekuchengetedza zvinyorwa kana kuchengetwa kwemhuri kwezvese zvinodikanwa zvezuva nezuva.
Tsanangudzo: 450mm (kureba kwepamberi) x 300 mm (upamhi hwepadivi) x 400 ~ 600 mm (kumusoro)
Dhirowa Bhokisi Chinyorwa: Transparent PS, PP
Chimiro Chinyorwa: ABS
indoor mudhirowa kabhineti
Iyo mbiri-dzimba dzemukati dhirowa kabhineti
Aya maviri kana matatu-epurasitiki epurasitiki dhirowa kabhodhi inowanzoitika kabati iri mune yekurara kana yevana mukamuri. Inoshandiswa kune imba yekuchengetera imba yezvinhu zvishoma, senge matoyi evana, zvigadzirwa, nezvimwewo. Zvakareruka, zviri nyore uye zvinoshanda, ruvara rwune hupenyu uye runodziya.
Saizi: 250mm (kumberi kureba) x 350mm (padivi upamhi) x 300mm (yakakwira)
Dhirowa bhokisi zvinhu: ABS, PP
Bhokisi furemu zvinhu: ABS
Multilayer dhirowa chikamu chekuunganidza bhokisi
Makabati madiki emadhirowa mazhinji anochengeterwa anowanzo shandiswa mumatura kupatsanura nekuchengetedza zvidimbu zvidiki zvakasiyana senge maresitor, ma capacitor, screws, nezvimwe. Rudzi urwu rwedhirowa rune zvidimbu zvakawanda, uye dhirowa rega rega rine marata madiki. Dhirowa dzakajeka dzinoita kuti zvive nyore kuona zvikamu mukati kubva kunze. Dhirowa mabhokisi akagadzirwa nePS zvinhu zvine hushoma hwakanyanya kuomarara. Dhirowa mabhokisi akagadzirwa neABS kana ABS + PC kutakura huremu.
320mm (kureba kumberi) x 210mm (upamhi hwepadivi) x 180mm (yakakwira)
Dhirowa bhokisi zvinhu: yakajeka PS, 73 mm x 40 mm x 19 mm
Bhokisi Rezvinhu: ABS
Multi-dhirowa faira kabhineti
Iri hombe rakakura-masiraidhi dhirowa rinonyanya kushandiswa kwekuchengetedza-kwenguva yakareba mafaera, zvinyorwa, zvinyorwa uye rumwe ruzivo. Dhirowa uye bhokisi rinogona kuvharwa. Dhirowa nemabhokisi akagadzirwa neABS kana ABS / PC zvinhu zvine simba riri nani.
Big mudhirowa chengetedzo kabhineti
Rudzi urwu rwedhirowa dhirowa rine mashoma zvitoro nemitsara, asi saizi rehoriyamu yedhiri rega rega rakakura. Iyo inoshandiswa kuchengeta zvinhu zvakakura senge machira, machira, mbatya, zviyo, nezvimwe.
Saizi yedhirowa mu
500 mm (kureba) x 600 mm (yakafara) x 1000 ~ 1500 mm (yakakwira).
Zvinhu: ABS, PP
Dhirowa Kuchengeta Cabinet
Multilayer yekuchengetera tswanda mukicheni
Rudzi urwu rwekuchengetera tswanda rinoshandiswa kwenguva pfupi-kuchengetedza michero nemiriwo mumashopu kana mumakicheni. Iyo dura-dura rekuchengetera tswanda inogona kushandisa kukuru nzvimbo, kufambisa kutora uye kuiswa kwezvinhu, uye inogona kufambiswa zvinoenderana nezvinodiwa. Maumbirwo edengu rekuchengetera ari nyore uye akasimba, uye izvo zvinodikanwa pakuonekwa hazvina kuomarara.
Saizi: 300 ~ 600mm (kureba) x 300mm (yakafara) x 1000 ~ 1500mm (yakakwira)
Zvinhu: PP, ABS
Firiji uye dhizaini yefriji
Dhirowa zvakajairika zvemukati midziyo yefiriji. Mafiriji firiji anoshandiswa kupatsanura michero, zviwitsi, zvinwiwa uye miriwo, izvo zvinoda kuchengetedzwa uye kusakuvara, uye zvine humwe hwakasimba tembiricha kuomarara. Zviyero zvinosiyana zvichienderana neakasiyana maficha efiriji. Dhirowa zvinhu zvinonyanya kuve PS kana PP.
Kuti uone zvakajeka zviri mudhirowa kunze, dhirowa rinowanzo gadzirwa neyakajeka zvinhu. PS zvinhu isarudzo yakakodzera.
Saizi: zvinoenderana nesaizi yefiriji uye firiji
Zvinyorwa zvemabhasikiti zvinowanzoiswa padesktop kuitira kuchengetedza kwenguva pfupi magwaro anoda kusainwa kana kupihwa. Zvinyorwa zvemabhasikiti zvinowanzo kuve zvakagadzirwa nemapuranga, makoramu uye zvikamu. Kazhinji, saizi yendege yesero rega kana nhete inoenderana nehukuru hwepepa reA4. Mabhasikiti uye zvikamu zvinowanzoitwa nejekiseni kuumbwa nePP kana ABS.
Tsanangudzo: 230mm (kumberi kureba) x 300 mm (upamhi hwepadivi) x 200 ~ 400 ~ 600 mm (kureba)
Basket Zvinhu: Transparent PS, PP
Basket Zvinhu: ABS
Mapurasitiki emadziro rack
Mapurasitiki emadziro rack, mapurasitiki emadziro emadziro (emadziro emadziro) anonyanya kushandiswa mudzimba nemahotera. Iwo macompact uye anotakurika, uye anogona nyore kugadziriswa uye kuiswa pamadziro emakamuri ekugara uye dzimba dzekugezera. Inoshandiswa kuisa zvinowanzoshandiswa zuva nezuva zvishandiso, senge mushonga wemazino bhurasho, reza, teapot, bhurasho, shampoo, shawa gel, cosmetic bhokisi, nezvimwewo, izvo vanhu vanoshandisa zuva rega rega.
Tsanangudzo: 4 ~ 5 epurasitiki zvikamu
Saizi: 450mm (L) x 180mm (W) X 300mm (H)
Ruvara: dema, chena, yero, bhuruu kana gadzirisa
Dhirowa epurasitiki nemakabati, ayo anodhura uye akareruka, auya muhupenyu hwevanhu. Dhirowa epurasitiki uye makabati anonyanya kuve PS, ABS, PP zvigadzirwa. Iwo anogona kuitwa akanaka nekupfapfaidza sirika kudhinda uye bronzing kuburikidza nekuumba kana post-kugadzirisa. Ukuru uye huwandu hwezvikamu zvinowanzo kuve zvakakura, uye saizi yejekiseni muforoma zvakare iri hombe, uye mutengo wakakwira. Iyo inokodzera kugadzirwa kwemazhinji emahara mahombe. Inoda huwandu hukuru hwemirairo kugovera mutengo weMold Investment uye uwane mutengo mukana, uyo unofungidzirwa mukugadzira chakuvhuvhu.
Pashure: Yakasimba epurasitiki yekuchengetedza bhokisi jekiseni kuumbwa
Pamusoro pamusoro kugadzirwa kwepurasitiki zvikamu
Nylon shaft yemagetsi emagetsi switch
Plastiki jekiseni muchina
Zvinhu zvenaironi chikamu jekiseni Kuumbwa
Zvikamu zvepurasitiki zvemagetsi